Isiqalo nesigcino zonke ulwazi imvelo libizwa ngesayensi yemvelo. Ngenxa ukuhlukahluka imvelo Sekuyizinkulungwane zeminyaka ehlukene izinkomba yesayensi kwamiswa esifundweni sawo. Yikuphi wesayensi cwaningo nemvelo? Okokuqala, kubalulekile-physics, i-biology, i-geography, ukufunda izinkanyezi, chemistry neminye imikhakha yesayensi. Lapho ososayensi bathola izakhiwo entsha ndaba, izigaba ezintsha avuleka ohlangothini ngalunye. Ngakho, kwakheka lonke uhlelo lolwazi - isayensi, ukutadisha nemvelo.
Lolu cwaningo ensimini amadili nge ekutadisheni izakhiwo jikelele yemihlobo ehlukeneko ndaba kanye nesimo ukuhamba kwayo, okungase mechanical, ezishisayo, zenuzi, kagesi, zenuzi. Physics - omunye ngqo wesayensi eziyisisekelo. Imithetho yemvelo kanye imiqondo ezingase zivezwe ngolimi zezibalo, wakha sisekelo isayensi yesimanje. Emibuthanweni kwesayensi, ubhekwa zokuhlola physics nokufundisa.
Phakathi kwale sayensi kukhona sub-izigaba eziningi, ngokwesibonelo, inani, athomu, physics yamangqamuzana, quantum Mechanics, njll
Chemistry futhi odlale indima ebalulekile ekwakheni yesimanje isithombe yesayensi zomhlaba. Kuyinto isayensi yemvelo etadisha impahla, abo isakhiwo, ukubunjwa, izakhiwo, kanye nenguquko. Ngaphezu kwalokho, izakhiwo izinto ezikhonjwe Ucwaningo - ngenxa ekusebenzelaneni kwabo nabanye. Lapha, ukunakwa igxile ifomu amakhemikhali ukunyakaza impahla. Ngaphakathi lo mkhakha wesayensi kukhona ukwahlukana organic, kohlaziyo, amakhemikhali nokusebenzelana kwawo ngokomzimba, njll
isayensi yemvelo ngokuthi astronomy kuyinto selwati ngomkhathi wethu. It ihlola ubunjalo ukunyakaza ezihlukahlukene izinto ezingcwele, izakhiwo zabo, ukuthuthukiswa, imvelaphi. Kuze kube manje, amabili izigaba yezinkanyezi waba isayensi ezimele. Kuyinto umbuzo cosmogony futhi Cosmology. Cosmology uhlola isakhiwo, nokuthuthukiswa kwazo zonke izinto zihambe kahle endaweni yonke ndawonye. Cosmogony ezikhethekile kuyi-umsuka izinto ezingcwele. Enye yezindawo zanamuhla astronomy - ukuhlola umkhathi.
Kuyinto isayensi yemvelo, ukutadisha ingxenye yayo ephilayo. biology kuncike - ukuphila njengoba uhlobo motion ndaba, kanye nemithetho ekuthuthukisweni yayo kanye nokuxhumana imvelo. Lapha sitadisha zonke izingxenye ezibalulekile - isakhiwo, umsebenzi, imvelaphi, ukuthuthukiswa, kwemvelo kanye zisakaza nezidalwa eziphilayo emhlabeni.
Le nkambu ucwaningo linenani eliphakeme kwezigatshana. Phakathi kwabo, anatomy, i-microbiology, iseli biology, ngesimiso semvelo, izakhi, kuhlanganise nabanye abaningi.
Lena isayensi jikelele nemvelo. Ngamanye amazwi, isayensi - sehliselwe isethi eyodwa phezulu zonke izimfundiso nemvelo. Lena akuyona nje generalized, kodwa futhi uhlelo oluhlangene yolwazi. I kwandulela ukuvela ngesayensi yemvelo kwaba isidingo sokuthola indlela entsha ehlangene. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba ngeso elibanzi ukwazi ngendalo nokusetshenziswa amaphethini oda kwezomnotho kazwelonke.
Wemvelo futhi ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili ezinkulu uhlobo into zocwaningo - organic wezinto ezingaphili. Ifomu wezinto wesayensi yemvelo iye ukutadisha ukunyakaza ingxenye emvelo angaphili, organic - ukubonakaliswa zokuphila.
On izindlela zokufunda kanye nesayensi okuqukethwe sehlukaniswe theory kanye nama-enokwehla. Ukubhalisa, ukufakwa, ekuqongeleleni kanye incazelo amaqiniso ababehileleke kwezesayensi enokwehla. Kulesi sigaba, ulwazi esigabeni sokuqala ukucubungula. cwaningo theory futhi ifingqa, ubeka phambili ithiyori, umbono, usungula imithetho yemvelo. Ngesisekelo izinkanyezi nomkhathi nemilingo wembula ezazingaziwa ubuhlobo esiyimbangela, futhi kwakhiwa umqondo jikelele ubunjalo - isithombe emhlabeni.
emkhakheni ngamunye yolwazi has ukujula yayo kanye nokunemba incazelo nezakhi ezihlukene nezakhiwo nemvelo. Ngenxa yalokhu, ngesikhathi esifanayo, kukhona eziningi ezihlukahlukene imibono mayelana nemvelo. Zonke isekelwe ezimisweni ezahlukene kanye ziyimifanekiso eseduze kuphela.
Ngakho, ukumazi imvelo Sekuyizinkulungwane zeminyaka kwakukhona inqubo kumiswa ngesayensi yemvelo. Le ndlela umahluko kwaba esiteji ledzingekako cognition. ibangelwa - isidingo sokucwaninga eningiliziwe zemvelo kanye nezinqubo. Basic isayensi yemvelo - i-chemistry, i-biology, i-physics, ukufunda izinkanyezi. Nokho, isimo kuyinto eziyinkimbinkimbi self umqondo nomzimba enezici. umzimba Ngakho-ke, lapho kuhlangana u-isayensi uvele ezihlobene ezifana Biophysics, isayensi yokuma kwezinto ezisemkhathini, i-chemistry ngokomzimba, njll Isayensi ukuthi study nemvelo, zenziwe kwesigaba esisodwa esibizwa isayensi.
I Lorenz ijika kanye yendima yayo ekuqhubeleni emnothweni
Wotho amagiya, ukusetshenziswa kwazo kanye umkhiqizo
Ekuthuthukiseni ukuqeqeshwa ubuchwepheshe
Mayelana kwendoda nomkayo: Updates, lawa amazwi amahle